Amniga Gaalkacyo oo puntland iyo galmduug iska kashanayan ,puntland oo digniin dirty | HOBYOMEDIA
Home WARARKA GALMUDUG Amniga Gaalkacyo oo puntland iyo galmduug iska kashanayan ,puntland oo digniin dirty
Amniga Gaalkacyo oo puntland iyo galmduug iska kashanayan ,puntland oo digniin dirty
Madaxweynaha dowlad Goboleedka Maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa sheegay in Maamulada Galmudug & Puntland oo wadajira ay diyaar u yihiin inay ka hortagaan kuwa falalka amni darro ka geysta Magaalada Gaalkacyo ee Gobolka Mudug.
Waxaa uu uga digay Xubnaha ka tirsan Ururka Al-Shabaab inay sii wadaan falalka Amni darro oo ay ka geystaan Gaalkacyo, isaga oo sheegay in laga gudbay xilligii la qarin jira kuwa dhibaatada geysta.
“Waxay ila tahay in laga gudbay xilligii aashuunka lagu adimi jiray, wayna dhamaaday in la iska dilo dadka aan waxba galabsan waana ka hortageeynaa ayuu yiri” Madaxweynaha Puntland.
Ugu dambeyn Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa ugu baaqay dhalinyarada ka tirsan Al-Shabaab inay isaga soo tagaan, isla markaana dadkooda dhinac ka raacaan.
Warkaan kasoo yeeray Madaxweyne Deni ayaa kusoo aadaya xilli dhowr jeer oo hore ay Magaalada Gaalkacyo ka dhaceen qaraxyo iyo dilal qorsheysan wallow bilihii la soo dhaafay amniga Magaalada uu ahaa mid wanaagsan.
Previous articleDegdeg madaxweyne Qoorqoor oo kusoo wajahan Muqdishu saakay Si uu xaliyo Khilaafka Sii xumanaaya ee Rooble iyo Farmaajo
Next articleWasaaradda Caafimaadka oo shaacisay dad hor leh oo u geeriyooday Covid19